बढ्दो कोरोना ! बिहे गरेको हप्ता दिन नबित्दै काठमाण्डौंकी एक युवतीको गयो ज्या,न -
बढ्दो कोरोना ! बिहे गरेको हप्ता दिन नबित्दै काठमाण्डौंकी एक युवतीको गयो ज्या,न
काठमाडौं-फैलिदो कोरोनाका कारण धेरैको ज्यान गैसकेको छ । रुघाखोकी लाग्दा सामान्य रुपमा नलिन सबैलाई सचेत गराउनु पर्ने बेला आएको छ । पछिल्लो पटक देखिएको कोरोनाले उमेर समुह भनेको छैन । यसले बच्चा देखि युवासम्म सबैलाई समातिरहेको छ । यस्तो कोरोनाको चपेटमा काठमाण्डौंकी एक युवती परेकी छिन् जसले बिहे भएको एक सातामै यो सन्सार छोड्नु पर्यो । उनलाई बिहेपहिले नै रूघाखोकी लागेको थियो तर, उनले त्यसलाई सामान्य ठान्नू नै ठूलो भूल भै दियो । बिहे नजिक आएकाले उहाँलेन आफ्नो स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या हुँदा कसैलाई भनिनन् । उनी सामान्य बिरामी भएको जानकारी भने उनको परिवारले दिएको हो । उनको परिवार बुढानिलकण्ठ नगरपालिका ११ पैंयुटार बस्ने गर्दछ । ती २३ वर्षीया युवतीको वैशाख ११ गते बिहे भएको थियो । उनको भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका ४ सुडालका युवकसँग उनको मागी बिहे भएको थियो ।
बिहे अघि केटा केटीको परिचय नभएपनि आफन्तले यो बिहे जुराइदिएको परिवारले बताएको छ । उनीहरूको चैतमै इङ्गेजमेन्ट भएको थियो । बिहेको लगन त्यतिबेलै जुराइएको थियो । उनीहरुको बिहे हुँदा काठमाण्डौंमा अहिलेजस्तो कोरोनाको गम्भीर प्रकोप पनि देखिएको थिएन । दिनदिनै कोरोनाको ग्राफ बढिरहेपनि त्यस समयमा अहिलेको जस्तो निषेधाज्ञा थिएन । बिहे गरेको पहिलो रात उनी श्रीमान्को घर गइन् । त्यसपछि भोलिपल्ट उनका श्रीमान् बेहुली फर्काउन ससुराली आए ।
उनको माइतमा केही बिधिहरु गर्नुपर्ने भएकाले माइतमै बसेका बेला युवतीलाई गाह्रो भएको थियो । युवतीसँग विवाह गरेका युवक इन्टेरियर डिजाइनर हुन् । बिहे भएको एक दिनमात्र उनीहरू सँगै रहे । उनलाई गाह्रो भएपछि भक्तपुर अस्पताल लगिएको थियो । त्यहाँ उपचारमा संलग्न डाक्टरका अनुसार ती युवतीलाई अस्पताल आउँदै सास फेर्न गाह्रो भइरहेको थियो । उनलाई ज्वरो, रुघाखोकी पनि थियो ।
परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ त छँदैथियो, त्यसमाथि उनलाई निमोनिया भइसकेको थियो । अस्पतालमा चिकित्सकले गरेका सबै प्रयास निरर्थक बनाउँदै, आफन्तलाई गहिरो शोकमा छोडेर कोरोनाले उनलाई बिहे भएको एक हप्तामै यो सन्सारबाट लिएर गयो ।
Previous भण्डारी परिवारमा रुवाबासी ! जिप दुर्घ,टना हुदाँ ५ जनाको मृ,त्यु
Next श,व पोष्टमार्टमको लागि हिडेको बैतडीमा जिप दुर्घ!टना,५ जनाको मृ,त्यु